Cenozoic Era: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara | Network Meteorology
Taa, anyị ga-eme njem gara aga. Ma ọ bụghị n'oge gara aga nke afọ ole na ole ma ọ bụ narị afọ ole na ole gara aga. Anyị ga-eme njem 66 nde afọ azụ rue ugbu a. Ma nke ahụ bụ ndị Cenozoic ọ bụ oge nke bụ atọ nke atọ kachasị oge akụkọ ntolite ụwa. Ọ bụ oge a kacha mara amara nke mpaghara ụwa na-enweta nhazi ha nwere taa. Anyị na-echeta nke ahụ kọntinent drift tiori na efere tectonics na-akọwa na kọntinent na-agagharị.
Youchọrọ ịma njirimara niile na ihe omume, ma ihe omumu na ihe ọmụmụ nke mego na Cenozoic? Na nke a, anyị ga-agwa gị niile 🙂
1 Kedu ihe bụ Cenozoic?
2 Njirimara nke oge Cenozoic
3 Kedu oge nke oge a na-ekpuchi?
3.1 Oge nke atọ
3.2 Oge quatary
4 Cenozoic ihu igwe
Kedu ihe bụ Cenozoic?
Geology, flora na fauna nke uwa adighi agbanwe agbanwe na oge. Kemgbe ọtụtụ afọ, ha na-agbanwe site na ịgafe ụdị na mgbanwe na gburugburu ebe obibi. Nkume, n'aka nke ọzọ, na-agagharị na kọntinent, na -emepụta ma na-ebibi ya na efere tectonic.
Okwu Cenozoic sitere na okwu Kainozoic. Ọ bụ onye England ọkà mmụta banyere mbara ala ji ya John phillips ịkpọ aha ngalaba dị nta nke Phanerozoic Aeon.
Oge Cenozoic bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụ oge mgbe dinosaur ahụ furu efu. Nke a bụ mmalite nke mgbanwe mgbanwe anụ ahụ. Na mgbakwunye, kọntinent nwetara nhazi nke edobere taa na flora na fauna wee malite. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ nke ụwa anyị gosipụtara, mere ka ọ gbanwee panorama niile a maara ugbu a.
Mụ anụmanụ dị na Cenozoic
N’oge Cenozoic, Oke Osimiri Atlantic jikọtara ọnụ wee ghọọ ugwu ugwu Atlantic. Mba ụfọdụ dịka India nwere nnukwu nsogbu tectonic nke rụpụtara ka e guzobere Himalayas. N'aka nke ọzọ, efere Afrịka gafere na Europe iji guzobe Switzerland Alps. N'ikpeazụ, na North America, e kere otu usoro ahụ site na otu usoro.
Nkume ndị dị n'oge a ka e mepụtara na kọntinent na ala dị larịị, na-enweta ọkwa dị ike karị. Nke a bụ n'ihi nrụgide dị elu nke olili miri emi, kemịkalụ kemịkal, na ọnọdụ dị elu kpatara. N'aka nke ọzọ, ọ bụ nkume sedimenti na-achịkwa oge a. Ihe kariri ọkara nke mmanụ ụwa niile a na-amịpụta ya site na nkwụsi ike nke nkume.
Njirimara nke oge Cenozoic
Ebe ọ bụ na oge a abanyela na ndị dinosaurs, e nwere ọtụtụ mgbanwe ndị mere na ọkwa mbara ala. Nke mbụ bụ mmalite na mmụba nke mammals. Site na enweghị dinosaurs dị ka asọmpi, ha nwere ike ịgbanwe ma gbasịa. Mkpụrụ ndụ ihe nketa ahụ nyere aka mee ka mmụba na mmegharị nke mammals gaa gburugburu dị iche iche.
N'ozuzu, enwere umu anumanu na uwa nile. Tectonic plate na-agagharị mgbe niile ma ọ bụ n'oge a ka Atlantic Ocean gbasaa. Ihe omume ndị kachasị dị mkpa ma dị mkpa taa bụ:
E guzobere nnukwu ugwu ugwu nke ụwa dum.
Ihe mbụ hominids pụtara.
Emepụtara okpu pola.
Dị mmadụ mere ka ọ pụta ìhè.
Kedu oge nke oge a na-ekpuchi?
Dị ka akọwara na geological oge Oge obula mejuputara otutu oge. E kewara Cenozoic na oge abụọ akpọrọ Tertiary na Quaternary. A na-ekewa ndị a n'oge dị iche iche.
Oge nke atọ
Njikọ nke kọntinent na nhazi ugwu dị ugbu a
Nke a bụ oge izizi ụdị ndụ dị n’elu ala ma n’elu mmiri yiri nke taa. Ebe ọ bụ na dinosaurs akwụsịla, anụmanụ ndị na-enye ara na anụ ufe na-achị ụwa. Nke a bụ n'ihi na ha enweghị ụdị asọmpi ọ bụla. Ugbua n'oge a, ahịhịa ndụ, anụmanụ na-enwu enwu, ndị isi ala, ụmụ ahụhụ na ọbụna whale dị adị n'oge a.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, a na-ekewa oge a n'oge dị iche iche bụ:
Paleocene. Ihe eji mara ya bu ihe oyi di na mbara ala site na ihe nchoputa nke nkpu polar. Nnukwu ala Pangea kewara ma kọntinent bịara dị ka nke taa. Ọtụtụ ụdị nnụnụ pụtara na mmepe nke angiosperms. Ọzọkwa, Greenland si North America pụọ.
Eocene. N’oge a, oke ugwu ndị ahụ a kpọtụrụ aha n’elu pụtara. Anumanu mepụtara nke ukwuu nke mere na ha ghọrọ anụmanụ kachasị mkpa. Horsesnyịnya ndị mbụ pụtara ma a mụọ ha. Mamfọdụ mammals dị ka whales na-emegharị na gburugburu mmiri.
Oligocene. Nke a bụ oge mgbe efere tectonic gara n'ihu na-emekọ ọnụ iji mepụta Oké Osimiri Mediterenian. E guzobere ugwu ndị dị ka nke Himalaya na Alps.
Miocene. Emechara usoro ugwu niile wee mebe mkpuchi mkpuchi Antarctic. Nke a mere ka ihu igwe niile nke ụwa na-ajụ oyi. Ọtụtụ ala ahịhịa ndụ malitere gburugburu ụwa na ụmụ anụmanụ malitere.
Pliocene. N'oge a, anụmanụ ndị na-enye ara ara rutere elu ma gbasaa. Ihu igwe dị oyi ma kpọọ nkụ ma hominids mbụ pụtara. Umu anumanu dika Ugwu Australopithecines na Homo habilis na Homo erectus, ndị nna ochie Ndị ọzọ.
Nke a bụ oge kachasị ọhụrụ nke anyị maara. Ekere ya uzo abuo:
Pleistocene. A makwaara ya dị ka afọ ice ebe ọ gbatịrị gafere otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụwa dum. E kpuchiri ebe ndị akpụrụ akpụbeghị. Ka ọ na-erule ngwụsị nke oge a, ọtụtụ anụmanụ na-egbu egbu.
Holocene. Ọ bụ oge nke ice na-apụ n'anya na-enye ala ihu na ịgbasa mbara ala kọntinent. Ihu igwe na-ekpo ọkụ nke nwere ụba osisi na ahịhịa. Developmụ mmadụ na-eto ma malite ịchụ nta na ọrụ ugbo.
Cenozoic ihu igwe
Ewere Cenozoic dị ka oge nke mbara ala jụrụ oyi. Ọ dịgidere ogologo oge. Mgbe Australia kewapụrụ kpamkpam na Antarctica n'oge Oligocene, ihu igwe dị mma nke ukwuu n'ihi ọdịdị nke Antarctic Circumpolar Ugbu a nke mere nnukwu jụrụ oyi nke Osimiri Antarctic.
N’oge Miocene enwere okpomoku n’ihi mwepụta nke ikuku carbon dioxide. Mgbe oyi dị jụụ nke ihu igwe, afọ mbụ nke ice malitere.
Site na ozi a ị ga-amụtakwu banyere akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Cenozoic Era: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara
Naanị gosi na m hụrụ peeji gị n'anya. Amụtawo m ọtụtụ ihe m na-amaghị ...